OLAN’NY FANANAN-TANY : Ny tsy fahafantarana ny lalàna mifehy no tena sakana · Aponga
Maro tokoa mantsy ny olona no misedra olana sy iharan’ny tsindry hazo lena amin’izao fotoana izao, noho ny tsy fahaizana ireo pitsopitsony rehetra manodidina izany fananan-tany izany. Araka ny fantatra aza izao dia maro amin’ireo tantsaha any ambanivohitra na ny monina an-drenivohitra no mbola tsy mahafantatra akory ny lalàna momba ny fananan-tany. Tafiditra ao anatin’ny olana sedrain’ny tantsaha izao, ohatra, ny tsy fahafantarany ny momba ny famindrana ny lova. Ny lalàna sy ny dingana rehetra atao raha maniry ny hangataka tanim-panjakana, io ihany koa dia isany tsy mazava amin’ny olona. Ankoatra ireo dia maro ihany koa no mbola tsy mahalala izay tokony hatao mahakasika ny famindrana tany ary ny fomba atao rehefa mividy na hivarotra tany.
Eo anatrehan’izany rehetra izany dia nanatanteraka famelabelaran- kevitra ny tao amin’ny renivohitr’i Fianarantsoa ny talata lasa teo. Tanjona tamin’ny fanatanterahana izany ny hamaliana ireo fanontaniana rehetra mahakasika ny olan’ny fananan-tany eo anivon’ny fiarahamonina. Araka izany àry dia ny tompon’andraikitry ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany ary ny fiarahamonina misehatra amin’ny fananan-tany sy ny radio Mampita no nantsoina handray anjara feno tamin’izany. Loabary an-dasy narahana adihevitra no nokarakaraina, araka ny fanazavana, mba hamaliana sy hanomezana torolalana momba ny olana eo amin’ny fananan-tany.
Raha ny fantatra àry dia ny tsy fahafantarana ny lalàna no tena sakana amin’ny ankapobeny. Ankoatry ny fanazavana dia tsara ny manatona ny birao manana ny fahalalana manokana mahakasika ny fananan-tany toy ny biraon’ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany, hoy hatrany ireo tompon’andraikitra. Araka ny tsapa dia maro ireo olona no liana sy nankasitraka izany hetsika notanterahan’ny Sif rezionaly izany tao amin’ny hotely Tombontsoa tany an-toerana, ny marainan’ny talata 27 febroary lasa teo. Antenaina fa hisy vokany tsara eo amin’ny sehatry ny fananan-tany araka izany izao hetsika izao.